» पत्रकारितामा स्वतन्त्रता
चार्जमा राखेको मोबाइल चिसो हातले छुँदा करेन्ट लागेर बालकको मृत्यु-बुटवलमा तलेजु भवानी मन्दिरको समुद्धघाटन सम्पन्न-कैलालीका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उच्च शर्तकता-धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनले क्रिकेट र‌ंगशाला निमार्णको काम शुरु गर्ने-भारी वर्षाका कारण विराटनगर बजार जलमग्न, रंगशाला नै डुबेपछि प्रतियोगिता सारियो-नेपालगञ्जमा श्रीमानले कुटेर गरे श्रीमतीको हत्या-ट्रकको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु-आफ्नै बाबुले गरे १४ वर्षीया छोरीको बलात्कार-मोरङमा घर जल्यो, रु ८० लाख क्षति-विप्लव समूहका दुई जिल्ला नेता पक्राउ
स्व + तन्त्र = स्वतन्त्र शब्द संस्कृतबाट आएको तत्सम हो । स्व भनेको आफू वा आफ्नो भन्ने हुन्छ भने, तन्त्र भनेको शासन हो । जसबाट यो सिद्ध हुन्छ आफू आफ्नो ठाउँमा रहेर आफ्नै लागी गरिने कर्म स्वतन्त्र हुन्छ ।
आफ्नो समजको लागी आफ्नै ठाउँ, समाज र देशको लागि लेख्नु, बोल्नु स्वतन्त्र हुन्छ । स्व भनेको अस्तित्व, प्रकृति हो, मुल केन्द्र हो । जसका लागि मानिस आजीवन संघर्ष गरिरहन्छ । पाणिनीय व्याकरणमा ( स्वस्व अवस्थायां प्रकृतिभाव:) भनिएको छ । जसको अर्थ प्रकृति सङ्ग सन्तुलन रहनु भन्ने हुन्छ । प्रकृति भनेको वास्तविकता हो । यथार्थ हो । मानिस सदैव दबाब, दमन र निश्चित घेरा तोडेर आफ्नै अस्तित्व चाहना गर्ने र स्वतन्त्र बाच्न खोज्ने प्राणी हो । संसारमा बन्धन कसैले चहादैन । बन्धन नहुनु भनेको स्वतन्त्र हुनु हो । स्वतन्त्रताको आकार असीमित हुन्छ । यस भित्र सबै अट्ने, सबै जोडिने र सबैको स्थान सन्तुलन रहेको हुन्छ ।
स्वतन्त्र भनेको संतुलन पनि हो । सन्तुलन भयो भने मात्र प्रगति सम्भव छ । सन्तुलनमा नै समानता हुन्छ । समानता भनेको उदारता हो । उदारताको लागि प्रतिबन्धित घेरामा सिमित भएर होइन राजनीति, सैद्धान्तिक आग्रहपूर्वाग्रह, धर्म सम्प्रदाय, जात, भाषा, समाज र निश्चित घेराहरूलाई परिवेशानुकुल तोड्न सक्नु पर्छ । मानिसको अन्तिम उदेश्य भौतिक सुख, मान, प्रतिष्ठा मात्र नभएर वास्तविक आनंद हो । त्यसको लागि पनि हामी स्वतन्त्र हुनु आवश्यक छ । हामी कुनै सङ्कीर्ण विचारमा कैद भएर होइन । आफ्नो अस्तित्वमा रहेर ” बसुधैव कुटुम्भकम् “भने भावना लाई आत्मसात गरेर मात्र स्वतन्त्रता लाई कायम राख्न सकिन्छ । पत्रकारि ताको जगतमा स्वतन्त्रता एक पहिलो आधार हो , जरो हो र माध्यम हो । महान वैज्ञानिक थोमस एल्भा एडिसनले भनेका छन् “फैलिएर रहेका र निचोर्दा रस आउने पत्रकारिता बाहेक अरु कुनै पेशा छैन । यो कति सुन्दर छ भने दैनिक हजारौ कहाँ पुग्दछ, तिनीहरूलाई ज्ञान, सूचना, शिक्षा, र मनोरन्जन प्रदान गर्दछ ।
मलाई आफू पत्रकार नभएकोमा खेद छ ।” उनले भने झैं स्वतन्त्र पत्रकारिता त्यो हो जहाँ बाट अनेकौं रसहरू पैदा हुन सक्छ । जसबाट ब्याक्ति, समाज , देश र विश्वलाई नै सुसूचित गराइरहेको हुन्छ । स्वतन्त्र पत्रकारिताले समाजमा दैनिक रुपमा भइरहने क्रियाकलापलाई सञ्चार माध्यमबाट स्वतन्त्र ढंगले प्रकाशन प्रसारण गर्दछ र वास्तविक ज्ञान, सूचना, शिक्षा, र मनोरन्जनका साथै सचेत एवं जिम्मेवार नागरिक बनाउन प्रेरित गर्दछ । स्वतन्त्र पत्रकारिताको उद्देश्य आदर्श समाजको निर्माण हो । स्वतन्त्रता बिनाको पत्रकारिता अपांग मात्र होइन अपूर्ण हुन्छ र अधुरो हुन्छ । पत्रकारिताले समाज रूपान्तरण गर्न पर्छ ।
रूपान्तरण हुनु भनेको सकारात्मक परिवर्तन हुनु हो । सकारात्मक परिवर्तनले नै सबैको हित गर्दछ, भलो गर्दछ र वास्तविकता स्थापित गर्दछ । सत्यता, स्पष्टता, निष्पक्षता मात्र नभएर स्वतन्त्रता पनि पत्रकारितको आधार हो ।
( लेखक स्वतन्त्र पत्रकार संघ नेपाल रूपन्देहीका उपाध्यक्ष हुन् )
रिसको परिणाम अन्तत : हानी
आज असार १५ : बिशेष दिन बिशेष महत्त्व, किसानहरूमा निराशा बढ्दै
त्रिभुवन विश्वविद्यालय नैतिकताको आईसीयूमा !
पुरुष बिना महिलालाई केही फरक पर्दैन तर, महिलाविना पुरुषको जिन्दगी अन्धकार नै हुन्छ !
सन्दर्भ गणतन्त्र दिवस : सम्बृद्धिको गोरेटो कोरिदै
टिप्पर दुर्घटनाको त्रास
चार्जमा राखेको मोबाइल चिसो हातले छुँदा करेन्ट लागेर बालकको मृत्यु
बुटवलमा तलेजु भवानी मन्दिरको समुद्धघाटन सम्पन्न
कैलालीका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उच्च शर्तकता
धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनले क्रिकेट र‌ंगशाला निमार्णको काम शुरु गर्ने
भारी वर्षाका कारण विराटनगर बजार जलमग्न, रंगशाला नै डुबेपछि प्रतियोगिता सारियो
नेपालगञ्जमा श्रीमानले कुटेर गरे श्रीमतीको हत्या
आफ्नै बाबुले गरे १४ वर्षीया छोरीको बलात्कार
मोरङमा घर जल्यो, रु ८० लाख क्षति